Ogaden News Agency (ONA) – Xadhiga Cabdi bade waxay astaan u tahay ololihii laynta shacabka in guuldarro lagala kulmay
Xadhiga Cabdi bade waxay astaan u tahay ololihii laynta shacabka in guuldarro lagala kulmay
Posted by ONA Admin	/ January 15, 2012
Wax walba hadii laga cafiyo Cabdi iley oo laga soo qaado inuu u samaynayay suu ugu soo boxo looltankii ka dhexeeyay gumaysi kalkaalka, miyaa laga cafin karaa dadka boqolaalka ah ee dambi la’aanta uu ku dilay suu maamulka Jigjiga u qabsado, boqolaalka xabsiga intuu dhigay aan dib dambe loo arag, boqolaalka gabdhood ee sharafta lahaa oo isagoo wada garanaya uu u gayn jiray saraakiisha gumaysiga ama uu ku fasaxay maxaysatada uu abaabulay.
Cabdi iley waxaa booska la keenay markii saraakiisha Wayaanaha ay go’aansadeen inay shacabka S.Ogadenya laayaan si aanay dib dambe ugu soo hadal qaadin xoriyad iyo aaya-ka-tash. Go’aanka noocan ah markuu gaadho gumaysigana wuxuu ku fuliyaa gacanta dadka uu gumaysto oo fulisa jariimadaa, taasoo ujeedada ka dambaysa ay tahay;
1- In dambiga uu shacaba ka galayo goorada laga saaro shacabkii uu laayay si loo yidhaahdo idinkaa dhexdiina isleynayay.
2- In dagaal sokeeye uu ka dhex huriyo shacabka oo gacan ku-dhiiglaha laynaya shacabka loo aaneeyo reer oo lagaga aargoosto sababtiisa.
Dhibaato aan waligeed ka dhicin Ogadenya ayuu Cabdi iley gacantiisa ku fuliyay isagoo gumaysiga Itobiya kula gorgortamaya. Mana ah arin la iloobi doono. Waxaa la hayaa magacyada dadkuu dilay iyo dadkuu sheegay inuu ku xidhayo Jigjiga oon ilaa iyo hadda la ogayn nolol iyo dhimasho. Waxaa la hayaa dadkii lagu jidh dilay xabsiyada oo qaarkood ay u naafoobeen.
Waxaa xasuusta galay hadalkii uu ka sheegay idaacadda BBC-da ninkii ku hadlayay magaca odayaasha reer Dirdhaba ee lahaa markaan u dacwoonay Cabdi iley ayuu nugu yidhi; “… kursigan aan ku fadhiyo waxaan ku aasay hoostiisa ina-adeerkay oon soo dilay.” waana runtii taasi oo been uma aanu sheegin odayaashaa.
Cabdi iley wuxuu la mid yahay General Nguyen Ngoc ee gacantiisa ku toogan jiray dadka maxaabiista ah dagaalkii Vietnam, waxaana hubaal ah inuu ka macna daran yahay, sababtoo ah waxaa la hayaa haween da’a ah oo gacantiisa uu ku qaraacay Cabdi iley. Waa la hayaa taariikhda Cabdi iley iyadoo dhamaystiran.
Waxyaabaha lagu qoslo ee loo jilay sida filimadii Mafia-yada waxaa ka mid ah xadhiga la sheegay inuu soo xidhay Cabdi iley ninkii u ahaa lataliyihiisii arimaha amniga Cabdi Bade oo u sii raacay sida la sheegay meelihii la yidhi wuu soo marmaray. Shaki kuma jiro inuu Cabdi bade yahay gacan-ku-dhiigle si naxariis dara ah oo –sadistic- ah (kuwa ku raaxaysta jidh dilka banii aadamka) ugu gumaadi jiray xabsiga loo yaqaano Jeel Ogaden dadka masaakiinta ah. Ujeedada hadda loo xidhay maxay tahay? Malaga yaabaa inuu Cabdi iley iska dhaadhiciyay, nacaybka loo qabo gacan-ku-dhiiglahan darteed in lagu iloobayo inay dadweynaha is-weydiinayaan su’aasha ah; Yaa dadka jeel Ogadeen ugu xidhnaa Cabdi bade u keeni jiray?.
Arimahanoo idil, sida socdaalkii riwaayada ahaa ee Cabdi iley iyo Cabdi bade ay jilayeen, hadana la sheegay in xabsiga loo taxaabay gacan-ku-dhiigle Cabdi bade markay qiimeeyeen dadkii shacabka ahaa ee daganaa degmada Bookh (sow ma’aha sheeko lagu qoslo !!) oo ku eedeeyay inuu ahaa dhiigyacab guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ka galay dambiyo iyo jariimooyin kala duwan, waxay muujinaysaa in uu fashilmay mashruucii laynta iyo cabudhinta shacabka.
Riwaayadda uu hadda dhigayo Cabdi iley, ee kolba sawirada uu leeyahay iga qaada, mar isagoo hooyo reer miyi ah garabka haysta, marna islaan gacnta ka dhunkanaya … ujeedada uu ka leeyahay isaga iyo gumaysiga fariimahaa u soo dhiibay haday tahay in lagu iloobo dambiyada xad dhaafka ahee uu ka galay shacabka S.Ogadenya oo mararka qaarkood si isir baadh ah loogu layn jiray miyiga, waxaa hubaal ah inay dambiile Cabdi iley iyo gumaysigaba laf toobin ku hayaan.
Riwaaydahanoo idil waxay muujinayaan inuu fashilmay ololihii naxariis darada ahaa ee lagu qaaday shacabka S.Ogadenya ee loo wakiishay Cabdi iley iyo la taliyihiisii Cabdi bade. Mana ah dambiyada laga galay shacabka S.Ogadenya mid ay soo alifeen labadan mujrim ee jilaya.
Dambiga laga galay shacabka Somaalida Ogadenya ee ilaa hadda socda waxaa ka masuul ah dhiigyacab Meles Zinawi, isaga oo kali ah umbayna tahay in maxkamadda la horkeeno, ka dibna kuwii gacantooda ku fulinaya amarka la siiyo uu ugu horeeyo mujrimka Cabdi iley.